Usizo lwabenza imisenenzi crepe umenzi: kanjani ukukhetha
Nice ukuqala ekuseni nge inkomishi yekhofi futhi isiphethu roll efudumele. Omuny abanolwazi bayazi ukuthi ukupheka kubo akulula kangako. Kaningi kuyenzeka ukuthi inhlama phandle elincanyana, idabukile, unamathele kuso. Ngenxa yalokho, ucasukile lonke usuku olunikezile. Kungani upheka e zokudla nezindawo zokudla pancake njalo vela okumnandi esinezimbobo? Ngenxa yokuthi banobuhlobo ngakwesokunene is a professional crepe umenzi. Ukusebenza ke aludingi amakhono akhethekile. Uma unquma ukuthenga umsizi esinjalo, kungase kudingeke uqonde ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama namasu zedivayisi.
udle kuphela pancake ku Shrove ngoLwesibili? Khona-ke uchwepheshe crepe umenzi ayidingeki emndenini wakho ngempela. Kodwa uma uthanda ukuba izitike ngokwakho nale isidlo ekuseni, lizoba umsizi esisemqoka, okuzokwenza ugcine isikhathi nomzamo.
Akuyona imfihlo ukuthi pancake okumnandi kakhulu etholakala kwi Skillet cast iron. Kodwa professional Pancake kagesi abenzi sabonakala kuphela onesandla umhlabeleli:
inikwa amandla yi ngokugcwele yi-kwamandla;
kungenzeka ukuba ukhethe lokushisa oyifunayo futhi ngokuzenzekelayo silondoloze ke;
Akudingi yimuphi umsebenzi kunoma iyiphi nolwazi olukhethekile namakhono.
Ngokuthenga leli thuluzi, ungaqiniseka ukuthi ngisho umzamo wokuqala awusoze uthole lumpy.
Pancake sasipheka ngesitofu professional crepe umenzi, njalo baphume esihlwabusayo ephansi fat. Futhi imfihlo akuyona kuphela iresiphi izitsha. Idivayisi ine namandla amakhulu, ukulawula izinga lokushisa. Ebusweni lapho silungiselela pancake has a enamathela non stick. Uchithele ungqimba ezondile inhlama induku ekhethekile lokhuni isakazwa nombala ebusweni zokusebenza.
Isici esibalulekile - indiza esifudumeza ngesikhathi esifanayo, ngokungafani kuya pan ngakho Batter ngeke Fry ngokulinganayo kuzo zonke izinhlangothi. Pancake etholakala non-nutritive ngenxa yokuthi ukuthi uwoyela noma bhotela kuthiwa neze asetshenziswa.
Yiqiniso, kuhle ukupheka uchwepheshe crepe umenzi, kuyodingeka umkhuba kancane. Uliphakamisela induku lokhuni isivinini, kodwa kulokhu a Pancake uthole nomzimba omncane, ngisho, ububanzi oyifunayo. Futhi prilovchilis kuwufanele ngiyolinganisa isilinganiso esifanele inhlama, ukuze akazange amlandele efudumele up for the surface usebe. Intengo yale crepes ngokwesilinganiso - ruble ayizigidi 50.
Ilungiselela pancake amaningi
In zokudlela ezinhle nezindawo zokudlela, chef isebenzisa abenzi Pancake okhokhelwayo. Inani kuncike umakhi, umthamo kanye nenani ezivuthayo. Kungase kube (kufika ku-6 amayunithi) eziningana. etholwe Ngakho ubukhulu Pancake ezincane (12 cm).
On crepes okunjalo anemifantu ekhethekile, ngakho inhlama ngeke bakwazi ukuvela. idivayisi okunjalo ekahle kakhulu ngesikhathi esifushane, ungakwazi ukubhaka lenqwaba pancake.
Ukubeka lokushisa kwesokudla, awukwazi ukhathazeke ukuthi isidlo uyozishisa. Non stick enamathela linamandla kahle imihuzuko, kodwa ukususa pancake ebusweni kudingeka spatula lokhuni noma abicah. Wand ukuze uqondanise yokuhlola lezi onobuhle akudingeki umenzi crepe. Izindleko thuluzi kuyinto ruble angaba yizinkulungwane 10.
Yini ukubheka lapho ekhetha Pancake abenzi okhokhelwayo?
Abantu abaningi bacabanga ukuthi professional crepe umenzi kuphela adingekayo amathilomu nezindawo zokudlela. Kodwa lena ngokuphelele akunjalo. Uma emndenini wakho kukhona abalandeli pancake okumnandi, idivayisi kuyoba owusizo ekhishini. Nazi amaphuzu asemqoka okudingeka ukunaka lapho ukuthenga imishini enjalo:
Inombolo ezivuthayo. Une umndeni encane? Ngaleso sikhathi kuyoba khona ngokwanele futhi omunye ebusweni wokubhaka izitsha, kodwa uma ngokuvamile ukupheka pancake yezivakashi, ukhethe idivayisi nge 4-6 ezivuthayo. Inqubo ngeke uhambe ngokushesha okungaka.
Kuyaphawuleka ukuthi ochwepheshe Pancake kuthatha eningi isikhala ekhishini ngenxa yobukhulu enganele. Hlela indawo lapho uzobe akhiwe.
Ukumboza ezivuthayo. Kungcono ukukhetha idivayisi ungqimba non stick, kulesi simo, ungaqiniseka ukuthi pancake kungukuthi wokushiswa.
Yomiselela ebusweni. Uma ufuna ukupheka pancake nge diameters ezahlukene, ungakwazi ukuthenga idivayisi replaceable evele ukusebenza.
Isikhathi. Perfect kulabo uthanda ukuzibandakanya ezindabeni eziningi kanyekanye. Beep ukukhumbuza lapho Pancake Kuyadingeka ukuba asuse ebusweni.
Ukushisa isibani. Ngalo, asikho isidingo njalo ukuhlola ukuthi ungakwazi uthele Batter, kungakhathaliseki ebusweni liyashisa. inkomba Red kusho ithimba phezulu ukupheka.
Unqume ukuthola crepes okhokhelwayo? Intengo yehluke kancane, cela yokuthengisa umsizi kudivayisi imingcele achazwe ngenhla, futhi ungaqiniseka e ukunemba ukuthengwa. pancake zakho okumnandi, Airy okumnandi.
Kungani kuwufanele ukuthenga Pancake
Uma ucabangela abenzi Pancake, singabona izici zabo ezinhle:
It ikuvumela ukuba ngokushesha ubhake inqwaba pancake okumnandi.
Indishi kuvela ikhalori-free (asikho isidingo ukusebenzisa uwoyela).
Ayikho intuthu futhi iphunga.
Of zona lezi zici ezimbi kukhona umonakalo omkhulu lisebenze ekhishini.
Impendulo yombuzo, indlela Fry pancake uchwepheshe crepe umenzi, mhlawumbe unesithakazelo kakhulu besifazane. Udinga ukwazi izimfihlo ezimbalwa ukuze uthole dish ephelele:
Ukuze inhlama is babenamathela induku lokhuni, ngoba bakubheka pancake, kumele kube pre-moisten ngamanzi abandayo.
Ukulungisa Pancake wokuqala kungcono ukusebenzisa inhlama ngaphezulu, ukuze kahle co inkanyezi nge ebusweni aqhumile.
Musa uthele inhlama kuze ke, kuze kube indawo ukupheka akuyona sekuqala ukufudumala ngokugcwele.
Yenza pancake ncwadi iresiphi kuphela eliza kudivayisi.
Crepes esingayenza engasiza ekusindiseni isikhathi esiningi nomzamo ukulungiselela izitsha okumnandi, okuyindawo izivakashi bayokujabulela.
Ingabe ngidinga umcamelo ngoba izingane?
Ungakhubaza kanjani ukuzulazula ku- "Tele2": imfundo
Abafel 'ukholo Lama-Fort of Sevastia - amaqhawe angamaKristu afela ukholo. I-Church of the Saints of the Forty Martyrs Martyrs: Incazelo, History and Interesting Facts
-HTML Tags Uhlu ezaziwayo
Alexandrinsky Theatre: umlando, isithombe, ukubuyekezwa
T-25 izixaxa: Ukucaciswa, incazelo, idivayisi kanye nokubuyekeza